Open your heart, Listen and Let’s sail to Goal – PVTV Myanmar
·6months ago ·25 Comments
Khin Pyone Myint says:
2021-07-17 at 10:12 PM
ဒီနေ့ မျှော်နေတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှင့်
2021-07-17 at 10:18 PM
nwe20 win says:
2021-07-17 at 10:27 PM
တို့ေတြအားလံုး ေတာ္လွန္ေရးျပီးဆံုးတဲ့ေန့မွာ အျပံုးေတြနဲ့ျပန္ဆံုခ်င္တယ္
Lin Aung says:
2021-07-17 at 10:39 PM
2021-07-17 at 10:41 PM
2021-07-17 at 10:53 PM
အကြမ်းဖက်သမားတွေက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ နဲ့ လူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်နေတာပါ
အာဏာသိမ်းပြီးတာနဲ့ ပရဟိတလုငယ်တွေနဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့တွေကို လူမဆန်စွာဖျက်ဆီးကြတယ်
နောက်ထပ် လူစုလူဝေးတွေအများကြီးဖြစ်အောင်လုပ်တယ် ‌ktv နဲ့ night class တွေဖွင့်တယ် လောင်းကစားတွေဖွင့်တယ်
နေက်ထပ် စဆးဆိုင်တွေကိုအတင်းပိတ်ခိုင်းတယ် အောက်စီဂျင်စက်ရုံနဲ့ပံ့ပိုးသူတွေကိုလိုက်ဖမ်းတယ်နှိပ်စက်တယ်ထောင်ချတယ်
နယ်တွေမှာဆိုရင်ရောဂါဖြစ်နေသူတွေကို Q စင်တာဆိုတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေပို့ပြီး ဘာဆေးမှမပေး ဘယ်ဆရာဝန် ဘယ်သူနာပြုမရှိ
ကူညီမဲ့သူတွေကိုလည်း ဖမ်းတယ်ထောင်ချတယ် အမြန်ကူညီဖိုလုပ်ပေးကြပါခင်ဗျာ
2021-07-17 at 11:02 PM
2021-07-17 at 11:12 PM
While the whole world organizes an indept investigation at Wuhan, China. If it isaman-made virus or natural virus. If it isalatter one, the world should sue China.
Yinyin Thant says:
2021-07-17 at 11:13 PM
Thazin Lal says:
2021-07-17 at 11:36 PM
Lin Tun says:
2021-07-18 at 12:25 AM
ကမ္ဘာကသိအောင်၊ ကမ္ဘာကအမြန်ဆုံးအရေးယူပေးဖို့ တောင်းဆိုပေးကြပါဗျာ။ ပြည်သူတွေ သေလှပြီ။
ပြည်သူမှ ပြည်သူသို့ စာနာကူညီ မျှဝေကြပါ
2021-07-18 at 12:55 AM
Covid first wave & second wave ထိက
အဆင့်မီ အစိုးရရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးစံမီခံစားခဲ့ရတယ်
ခု Covid third wave မှာတော့ အာဏာရူး
အဆင့်နိမ့် စကစရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးစံမမီ ပေမမီ ဒေါက်မမီ အောက်တန်းစား လုပ်ရပ် ခံစား နေရတယ်
2021-07-18 at 2:00 AM
than zan says:
2021-07-18 at 7:42 AM
Thida Lwin says:
2021-07-18 at 8:04 AM
2021-07-18 at 8:33 AM
kyaw soe lin says:
2021-07-18 at 10:07 AM
Lso New star says:
2021-07-18 at 11:11 AM
2021-07-18 at 11:12 AM
Kyi Than says:
2021-07-18 at 11:38 AM
Kywe Gyi says:
2021-07-18 at 2:18 PM
2021-07-18 at 2:52 PM
2021-07-18 at 7:28 PM
Good rights movement gods blessed families 'healthy'@
2021-07-19 at 11:03 PM
Like 900,723	Fans
PVTV ၏ တော်လှန်ရေးအနုပညာကဏ္ဍ (အက်ဆေး)…